को हुन् मिस नेपाल विजेता प्रियंका रानी जोशी ? - ramechhapkhabar.com
को हुन् मिस नेपाल विजेता प्रियंका रानी जोशी ?
मिस नेपाल २०२२ कि विजेता प्रियंका रानी जोशी २४ वर्षकी भइन् । गोदावरीमा शनिबार सम्पन्न भएको फिनालेमा जोशीले मिस नेपाल को ताज पहिरिएकी हुन्। उनले ६ वर्ष अघि ऐन भो मोडलिङ प्रतिष्पर्धाको फष्ट रनर अप जितेकी थिइन् । मोडलिङ उनको उद्देश्य थिएन । सन् २०१७ मा मोडलिङ प्रतिष्पर्धामा उपविजेता हुँदा मोडलिङमा करिअर बनाउँछु भनी नसोचेको बताएकी थिइन् । यसलाई मात्र आफ्नो रहर मात्र बनाएको बताएकी थिइन् । तर, समयले उनलाई मिस नेपाल बनाइदियो ।
प्रियंका अध्ययनमा बढी ध्यान दिन्थिन् । उनलाई बाल्यकालमा समाचारवाचिका बन्ने रहर थियो । त्यही उद्देश्यका साथ मिडिया अध्ययन गरिन् । प्रियंकाले विद्यालयको शिक्षा दार्जिलिङमा पूरा गरेकी थिइन् । जोशी पत्रकारिताकी विद्यार्थी हुन्। माइतीघरस्थित सेन्ट जेभियर्समा उनले पत्रकारिता पढेकी हुन।
यो पनि… सचिन रौनियारकी छोरी सिल्भियाको भिडियोमा डेब्यू
गायक सचिन रौनियारकी छोरी सिल्भिया रौनियारले अभिनयमा डेब्यू गरेकी छिन् । आफ्नै बुबा सचिन रौनियारको गीत ‘किन हर हर’ (पपया भर्सेज जिलेट) बाट म्यूजिक भिडियोमा उनले अभिनय गरेकी हुन् ।
दीपक शर्माको शब्द र संगीत रहेको गीतको भिडियोमा सिल्भियाको साथमा सुनिल छेत्रीको पनि अभिनय रहेको छ । सचिन र गायिका अस्मिता अधिकारीको पनि युगल स्वर समाबेश गीतको भिडियोलाई सुनिल छेत्रीले नै निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा दुर्गा पौडेलको सिनेमाटोग्राफी र अमृत चापागाईको सम्पादन रहेको छ । छोरीसँग सहकार्य गरेको र आफ्नै युट्युबमार्फत गीत सार्वजनिक गरेका कारण यो गीत उनका लागि विशेष छ ।
अन्य गीतमा जस्तै स्रोताहरुको माया र आशीर्वाद पाउने अपेक्षा राखेको गायक सचिनले बताएका छन् । गायनमा करिब ३ दशक बिताइसकेका सचिनले बिक्रम संवत २०४३ सालमा पहिलो एल्बम ’सर्च’ बजारमा ल्याएका उनले १२ वटा एल्बम सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने धेरै गीतहरु दर्शक माझ लोकप्रिय छन् ।